DAAWO VIDEO:Soomaliland oo Ka Jawaabtey Nabadi Buurmadow ka Iclaamiyey carmo. – Marqaanmedia24.com
DAAWO VIDEO:Soomaliland oo Ka Jawaabtey Nabadi Buurmadow ka Iclaamiyey carmo.
April 16, 2018 maqal iyo muuqaal, wararka 5
Qaar ka Mid Ah wax garadka Soomaliland Ayaa ka Hadlay hadalkii uu ku dhawaaqay buurmadow Shalay in nabada la Ilaaliyo.
waxay ku tilmaameen Inuu yahay nin ana Cidina Dirsan oo hadalkiisa Isaga U gooni yahay.
DEG DEG DAAWO MUUQAAL:Madaxweyne Gaas”Puntland jari mayso Xiriirka Imaraadka Waxan ku badalanayna Ma Jiro”
Wiil Local ku tilmaamay Muuse bixii oo xabsi Culus lagu xukumay
Soomaaliya iyo Somaalinimada waxaa weligood iyo waaqood ba u taagnaa oo gabboodka iyo gaashaanka u noqday Qowmiyadda Daarood iyo Soomaalida kale ee la yaso. Qarannimada Soomaaliya qowmiyaddan barakeysan iyo qabiillada la cunsuriyeeyo ayaa dib u soo taagay oo lafaheedii soo kabay. Laakiin libintu waxay ku jirtaa Qowmiyadda Daarood oo marka hore mansabkeedii dhaxalgalka ahaa qumaati u soo ceshata. Mansabkaasu taariikhdooda dahabiga ah ee boqortooyinka iyo saldanaha ayuu ku suntan yahay oo waa in laga billaabo Puntland iyo Jubbaland oo martabaddaas loogu caleemo saaro marka hore.
Bal waxaad u fiirsataan oo keli ah xaqiiqada ah in Puntland ay noqotay goobta qudh ah ee dalka oo dhan Issimada Soomaaliyeed inta ay madal iskugu keeni karto sidii sooyaalku ahaa ku marti soori karta. Hibadaas Rabbaaniga ah ayaa si dhakhso leh ugu sahli karta in ay Puntland dib u hanato mansabkeedaas taariikhiga ah ee u sii fududeyn lahaa in ay Soomaalida oo dhan Eebbe idamkii iyo fadligii ba hoggaan dhaqameed iyo hoggaan siyaasadeed suubban oo sugan u noqoto oo inta ay isku dubba riddo deeto libinta si dhab ah ugu soo hoyisa. Puntland taajkeeda toos madaxa ha u saarato illayn ma qarsoona ee!
Bal car Ahmed cudbi iyo xulafadiisa ha garteen in aan Samiri meel gaadhsiin karin.
Xaajiyo Saalaxo iyadu aqalkii bay aslaysaa.
Saalaxoooy huuno soo deg kkkkkkkkkkkkkkkk
Kkk kkkkk KAS DUMAR OO KADA LOOB RAG KAAGA DAMBEEYAY KAAD KU OGAAYD MA AHA. war meeyay shirkii waaynaa ALAA WAAYNE oo aay isugu tageen umadii somali KU abtirsan jidhay ee Kal hore KA dhacay HARGAAYSA OO min gaariisa ilaa loowyacado laaysuu yimi kkkkkkkk soamali ayaa waxaay tiraahda (WANKA IDAHA AH ILAA LAGA GOOWRACO INDHIHIISU CIRKA MA ARKAAN).
War adigu ma waxaad u qabtaa in aad ka mid tahay dadkaadigaa waraabe dadoow yahoow Huutuugaa?Haddii ad wax tahay waxaa laga arki lahaa dhulkaaga iyo dadkaaga ad intaas la dabo taagan tahay Bom iyo Baasuke.
Mar hore ayuu faysal cali waraabe sheegay meesha in aysan waxgarad ku haysaa ninkaan 2 sano ka hor gorowe ayuu joogay oo sifiican loogu soo dhaweyey markii c.waaxid gamadid xabsiga laga siidayneyey maantana was kaas nabada diidan